शुक्रवार, माघ ७, २०७८ ०१:०५:१७ युनिकोड
मंगलबार, मंसिर ७, २०७८ कञ्चन खवर
७ मंसिर, काठमाण्डौ ।
१३ जना गोर्खा भी.सी.को सम्झनामा जूमको माध्यमद्वारा युद्ध साहित्य गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । १३ र १४ नोभेम्बर २०२१ का दिन आयोजित यस दुई दिवसीय कार्यक्रममा आठ राष्ट्रका छ दर्जनभन्दा बढी साहित्य अनुरागीहरुको सहभागिता रहेको थियो । विश्व नेपाली साहित्य महासंघ, पश्चिम युके शाखा र विश्व नेपाली साहित्य महासंघ, दक्षिण युके शाखाको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
प्रथम दिनको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बेल्जियमका लागि पूर्वराजदुत महामहिम लोकबहादुर क्षेत्री हुनुहुन्थ्यो ।कार्यक्रममा भेष थापाद्वारा निर्मित भी।सी। शेरबहादुर थापा क्षेत्रीको समाधिस्थल स्यानमारिनोको वृतचित्र पनि प्रदर्शन गरिएको थियो । दोस्रो दिनको कार्यक्रममा विश्व नेपाली साहित्य महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरेन्द्र लिम्बू परदेशी प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो । विगतका युद्धहरुमा सहादत प्राप्त गरेका सैनिकलाई श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै युद्ध सृजनाहरु कविता, गित, गजल र मुक्तक वाचन गरेर कार्यक्रम सम्पन्न भएकोमा आफू अति नै प्रभावित भएको बताउँदै, यो एक ऐतिहासिक कार्य भएको उहाँले बताउनुभयो । युद्ध साहित्यलाई प्रवर्धन गर्ने मुख्य उदेश्य रहेको यस कार्यक्रममा ब्रिटिस गोर्खा पल्टन, भारतीय गोर्खा पल्टन, गोर्खा रिजर्भ युनिट ब्रुनाई, सिङ्गापुर पुलिसमा सेवारत् गोर्खाली, नेपाल प्रहरी, नेपाली सैनिकमा सेवारत् सैनिक साथै अन्य नेपाली साहित्य संघहरुमा आवद्ध स्रजकहरुको उत्साहजनक सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा सिर्जना वाचनका साथसाथै युद्ध साहित्यमाथि विमर्श पनि गरिएको थियो । प्रमुख वक्ताको रुपमा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता विक्रमवीर थापा हुनुहुन्थ्यो भने युद्ध उपन्यासमा विध्यावारिधि गरेका डा. भुपेन घिडिङले पनि यस विषयमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु भएको थियो । त्यसैगरी असम राइफलमा सेवारत् सैनिक कवि विशाल के.सी.ले पनि आफ्नो विशेष मन्तव्य राख्दै सृजना वाचन गर्नुभएको थियो ।
बेलायतमा रिमेम्वरेन्स डे अर्थात् पप्पी डे पनि भनेर जानिने दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमको प्रमुख संयोजक विजय हितानले गर्नुभएको थियो । गोर्खालीको गौरवशाली इतिहासलाई साहित्यमार्फत् आम पाठकमाझ ल्याउन सेवारत् सैनिकले नै कलम चलाउनु पर्छ र यसको लागि पल्टनले नै प्रोत्सान गर्नुपर्ने मन्तव्य उहाँले राख्नुभएको थियो । सन् २०२१ देखि पहिलोचोटि ‘गोर्खा हिस्ट्री मन्थ’ को अवधारणा अघि सारिएको बताउँदै उहाँले गोर्खालीका युद्ध इतिहासलाई नेपाली साहित्यका तप्का तप्कामा सबैले विचार बिमर्श गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पहिलो दिनको कार्यक्रमको सभापतित्व वि.ने.सा.म. पश्चिम शाखाका अध्यक्ष लालसुन्दर राईले गर्नुभएको थियो । उपाध्यक्ष भरत लोहरुङ राईले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव शान्ती लिम्बूले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको उद्घघाटन सुरेन्द्र इङ्नामद्वारा रचित ‘लाहुरेको कथा’ गीतको भिडियो प्रदर्शन गरेर गरिएको थियो । दोस्रो दिनको कार्यक्रमको अध्यक्षता वि.ने.सा.म. दक्षिण युके शाखाका अध्यक्ष विजय हितानले गर्नुभएको थियो । उपाध्यक्ष थीर थापाले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव अमित थेवेले गर्नु भएको थियो । भरत लोहरुङ राईद्वारा रचित ‘बिहानीको झुल्के घाम’ गीतको भिडियो प्रदर्शन गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ७, २०७८, १०:२४:००